टवाइलेटमा किशोरीसँग ‘यौन सम्पर्क’ गर्दैगर्दा रंगेहात सेनाका मेजर पक्राउ ! « Sajha Page
टवाइलेटमा किशोरीसँग ‘यौन सम्पर्क’ गर्दैगर्दा रंगेहात सेनाका मेजर पक्राउ !
काठमाडौं । ‘क्याटबरी खाइरहेकी थिएँ । अंकलले चुप्पा गर्नुभयो । मैले पनि अंकल भनेर म्वाई खाएँ । पहिला पहिला पनि मायाँ गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले नै मेरो हात तल गरेर यहाँ छोउ भन्नु भयो । डर लाग्यो नाई अंकल भनेँ । तर, केही हुँदैन नानु भनेर सम्झाउनु भयो ।
बुद्धनगरस्थित आफन्तको घरमा पहिला पनि आउ जाउ गर्थे । सेनाको करिअरवाला अफिसरले नराम्रो केही गर्लान भनेर नराम्रो कसैले सोच्ने कुरा भएन । तर, आएका बेला परिवारका अरु सदस्यको त्यति ख्याल नगर्ने, गाउँबाट पढ्न आएकी र परिवारसँगै बस्ने किशोरीलाई बढी समय दिने । परिवारका सदस्यल किशोरीलाई सोधे तर, उनले ‘अंकलले खाने कुरा ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने मात्रै गरेकी थिइन् । एकचोटी आएको बेला घरका सदस्यले निगरानी गरे । शौचालयको भेन्टिलेटरमा हेरे । दृष्य सामान्य थिएन । प्रभव किशोरीबाट यौन व्यबहार गराईरहेका थिए । उनलाई हात र मुखबाट मैथुन गराउने कार्यमा थिए । परिवारका सदस्यले प्रहरीलई फोन गरे । प्रहरी पुग्दासम्म उनीहरु बन्द कोठामा भित्रै थिए । ढक्ढक्याएको केही समयपछि मात्रै ढोका खोले । ‘हामीलाई यहीँबाट आएको इन्फरमेशनको आधारमा हजुरलाई लिन आएको ।’ प्रभवले जान आनकानी गरे । आफ्नो परिचय बताए । शैनिक मुख्यालयको अनुमति विना लैजान नमिल्ने अडान लिए । तर, प्रहरीले मानेनन् । यसबीच किशोरीलाई परिवारका आफन्तले आफू तिर लगे ।
अस्विकार गर्दा गर्दै मेजर प्रहरीको गाडीमा चढाईए । प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि उनले भने,‘त्यस्तो केही होइन मैले उसलाई पढाईको लागि सपोर्ट गर्ने गरेको छु । काठमाडौं आएको बेला खर्च छाडेपछि, कपि कलमहरु किनिदिएर पढाईको बारेमा सोपध्दै थिएा ।’ प्रहरीले भने,‘हामीलाई एसइए (सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एण्ड एब्युज) मा रिपोर्ट आएको छ ।’ उनले इम्पोसिबल भन्दै अस्विकार गरे । तर, एकछिनमै किशोरी त्यहाँ आइन् । उनले पनि सिधै केही भनिहाल्न सकिनन् । प्रहरीले सोधे,‘अंकलले तिमीलाई के के गर्नु भयो ? नडराई भन ।’ किशोरीले सुनाईन्,‘मैले नाइ भन्दाभन्दै पनि अंकलले केही हुँदैन भनेर विभन्न ठाउँमा ‘चुप्पा’ गर्न लगाउनु भयो ।
प्रहरीले किशोरीको स्वास्थ्य परिक्षण गरायो । निरन्तर रक्तस्राव भइरहेको रिपोर्ट आयो । महिनावरी पनि नभएको किशोरीको त्यस्तो हालत हुनुको एउटै कारण थियो,‘यौन सम्पर्क’ ।
प्रहरीले सेनाको हाकीम समातिएपछि शैनिक प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने भयो । त्यहाँ पुगेका शैनिक प्रहरी हाकिमले प्रभवलाई आफूहरुकै हिरासतमा राखिने र शैनिक ऐन अनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने भनी जिम्मा लिन खोजे । तर, प्रहरीले प्राविधिक समस्या दर्शायो बुधबारको जनआस्था साप्ताहिक ले यो खबर प्रमुखताका साथ छापेको छ ।